Olee otú Zọpụta iPhone Text Ozi Computer
Olee otú Zọpụta iPhone Text Ozi
Ajụjụ: Ana m achọ a ụzọ zọpụta niile ozi ederede site na iPhone na kọmputa ruo mgbe ị na-elele. Ọ dị onye na-enwe-enwe nke na-azọpụta iPhone ozi ederede ozugbo na kọmputa? Biko nyere m aka!
Chọrọ ịzọpụta ozi ederede site na iPhone ka kọmputa na-onwe elu iPhone ohere, n'ihi na ozi ederede na-ukwuu ohere nke iPhone? Ụfọdụ ndị a kpọrọ aha nke na-eme a nseta ihuenyo nke ozi ederede egosi na iPhone. Chọpụta, ọ na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ SMS, ọ ga-ewe gị ogologo oge ịzọpụta ozi ederede na iPhone. N'eziokwu, ọ bụghị ihe ike dị ka ị na-eche ịzọpụta ozi ederede (ịhụnanya ozi) on iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S / 4 / 3GS dị ka a ogugu faịlụ na kọmputa. Ihe niile ị chọrọ bụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru.
Ihe gị Mkpa:
A Windows PC ma ọ bụ Mac;
Gị iPhone na eriri USB;
Wondershare Dr.Fone Maka iOS;
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ a desktọọpụ ngwá ọrụ nke ga-enyere ị na-azọpụta niile iPhone ederede ozi na kọmputa dị ka ogugu na printable faịlụ. Ị nwere ike ibudata free ikpe mbipute na gị Windows PC ma ọ bụ Mac inwe a-agbalị. Right now Wondershare Dr.Fone maka iOS (n'ihi na Windows) na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) niile bụ dị.
Ọ bụrụ na ị na-eleta na peeji a site iPad, iPhone ma ọ bụ iPod aka, biko ịgbanwee gaa na a na kọmputa ibudata Wondershare Dr.Fone maka iOS inwe a-agbalị.
iPhone Data Recovery - Save iPhone Text Ozi Computer
Zọpụta ozi ederede site na iPhone na kọmputa hassle kpamkpam;
Save iPhone ozi ederede na Mgbakwụnye dị ka HTML / XML / TXT faịlụ;
Akwado iPhone: iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, na ndị ọzọ >>
Export iPhone ederede ozi printable faịlụ
399.935.084 ndị ebudatara ya
Save iPhone Text Ozi PC
Save iPhone Text Ozi Mac
Nzọụkwụ 1. Bilie gị iPhone jikọọ na Windows kọmputa
Jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na a dijitalụ USB. Mgbe ahụ na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ma ọ bụ iPhone 4S, ị ga-enweta bụ isi window dị ka ndị a.
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, ị ga-ahụ isi window dị iche iche. Echegbula! Nnọọ na-eso ihe ị na-ahụ screenshot ịzọpụta ozi ederede site na iPhone na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị iPhone maka ozi ederede na ya
Dị ka ihe iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S onye ọrụ, gị na mkpa iji pịa "Malite iṅomi" bọtịnụ na window na-amalite ịgụ isiokwu gị iPhone maka data na ya.
Dị ka ihe iPhone 4 / 3GS njirimara, i kwesịrị iso nzọụkwụ n'okpuru ịbanye ngwaọrụ scanning mode ike iṅomi gị iPhone:
1. Jide gị iPhone na pịa "Malite".
2. Jide Ike na Home buttons n'otu oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Hapụ Ike button, na na-na Homebutton enwe, ruo mgbe ị na-gwara na ị na banyere scanning mode ọma.
Mgbe ị na mere nzọụkwụ n'elu, usoro ihe omume ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone maka data na ya dị ka ndị.
Nzọụkwụ 3. Preview na-azọpụta iPhone ozi gị na kọmputa
Mgbe iṅomi completes, niile data na gị iPhone ga-hụrụ na-egosipụta na edemede. Pịa "Ozi" na n'aka ekpe. Ịnwere ike ihuchalu zuru ọdịnaya nke gị niile ozi eri, gụnyere iMessages. Ego a, Atiya na pịa "Naghachi". I nwere ike ịzọpụta ozi na iPhone gị na kọmputa ugbu a. Ọ bụ a ogugu HTML faịlụ, mma maka echebekwa ma ọ bụ na-ebi akwụkwọ.
Nzọụkwụ 1. Họrọ a mgbake mode
Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume gị na Mac, ihe mbụ ị na chọrọ ime na-ahọpụta a mgbake mode. Iji zọpụta ozi na gị iPhone, i kwesịrị ịhọrọ mgbake mode nke "naputa site na iOS Ngwaọrụ". Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa.
Mgbe ị jikọọ ihe iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S na kọmputa, usoro ihe omume ga-egosi dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na ị na-eji iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, na windo anya obere dị iche iche.
Nzọụkwụ 2. Malite ịgụ isiokwu gị iPhone
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iṅomi gị iPhone ugbu a. N'ihi na iPhone iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5C / 5S / 5 / 4S, ị pụrụ nanị pịa Malite na window ime ya. N'ihi na iPhone 4 / 3GS, ị na-achọrọ ịbanye gị iPhone si scanning mode ka ike iṅomi ya n'ihi na gị data na ya. Soro ndu n'okpuru:
2. Jide Ike na Home buttons n'out oge maka kpọmkwem 10 sekọnd.
3. Hapụ Ike button, na na-na Home button enwe.
Mgbe ị na-gwara na ị na banyere, hapụ Home bọtịnụ. Usoro ihe omume ga iṅomi gị iPhone na-akpaghị aka maka data na ya.
Nzọụkwụ 3. Save ozi ederede na iPhone gị Mac
Doppler ga-ewe gị sekọnd ole na ole. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta a Doppler N'ihi dị ka ndị a. Họrọ udi nke "Ozi" na ekpe. Ịnwere ike ihuchalu zuru ọdịnaya na-azọpụta ha gị Mac site na ịpị "Naghachi".
N'anya Ozi unu ga-amata
Olee otú ịchọta ehichapụ ozi ederede na iPhone
Olee otú Naghachi ehichapụ Videos si iPhone
Olee otú Hichapụ ozi ederede site na iPhone
Olee otú Naghachi Voice Memos si iPhone
Olee otú Naghachi ehichapụ Notes si iPhone
Olee otú Bipute ozi ederede site na iPhone
Gịnị bụ New Na iOS 7.1
Otú nyefee ozi ederede site na iPhone ka Computer
Full Solutions nyefee Data ọ bụla na ekwentị na New iPhone 6s (Plus)
NDỤMỌDỤ & Aghụghọ maka Olee otú ndabere Pictures si iPhone
Nwụrụ anwụ iPhone Data Recovery: Naghachi Data si nwụrụ anwụ iPhone
Olee otú mmekọrịta iPhone ka New Computer zuru okè
> Resource> iPhone> Olee otú iji Zọpụta iPhone Text Ozi